Icon | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
ရွှေရောင် Icon အကြည်လေး တွေနဲ့ အလှဆင် နိုင်မယ့် - Golden Glass Icon Pack HD v2.7 Apk
ကျွန်တော် အခု တင်ပေး လိုက်တဲ့ Android ဖုန်းမှာ အသုံးပြု နိုင်မယ့် ရွှေအိုရောင် Icon အကြည် လေးတွေ ကတော့ တော်တော် လေးကို လှပါတယ်။
Icon လေးတွေကို ကြည့်ရ တာလည်း တမျိုးလေး ဆန်းနေ ပါတယ်။ နမူနာ ကြည့်နိုင်ဖို့ အတွက် အောက်မှာ Screen Shot တွေကို ကြည့် လိုက်ပါဦး။
ကြိုက်နှစ်သက်တယ် အသုံး ပြုချင်တယ် ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ ဒေါင်းယူနိုင် ပါတယ်။
Android OS 1.6 နှင့် အထက် ဖုန်းများမှာ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါ တယ်။
တွဲဖက် အသုံးပြုနိုင်မယ့် Launcher တွေကို လည်း အောက်မှာ ဖော်ပြပေး လိုက် ပါတယ်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, March 24, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ Android, Icon, Phone Application, Theme
IconCool Studio Pro 8.20 Build 140222 (RePost)
IconCool Studio Pro 8.20 Build 140222 (RePost) | 23.55 MB
IconCool Studio 8 not only supports and runs stable on the ultimate Windows Vista OS published by Microsoft Corporation but also supports icon editing and creating (including size of 256×256) on Windows Vista OS.
IconCool Studio7also allows you to send an image to PhotoShop. From IconCool Studio 8, you just choose “Send this image to PhotoShop” from the pop-up menu. The current image will then be transferred to PhotoShop editing area.
11. Friendly interface and comfortable operating experience,
more stable quality and running efficiency IconCool Studio 8 is easy to use withafriendly interface.
We understand that designers are accustomed to using design software such as PhotoShop, Flash, and Fireworks. We developed the interface and operating methods of IconCool Studio 8 with your comfort in mind. With self-contained coding and optimization IconCool Studio7allows more stable quality and running efficiency to be available.
Home Page : www.iconcool.com
ကဏ္ဍ Graphics, Icon, Studio
Android Devices တွေမှာ နောက်ဆုံးထွက် Lollipop style အသုံးပြု ချင်သူများ အတွက်
Android Devices တွေမှာနောက်ဆုံးထွက် Lollipop style အသုံးပြု ချင်သူများအတွက် Lollipop
Themes များ ဒေါင်းလော့ ရယူနိူင် ပါပြီ။
ယ္ခုတင်ပေးလိုက်သော Themes များကို အသုံးပြုနိူင်ရန် အတွက် မိမိဖုန်းမှာ
များထဲမှ တခုကို သွင်းထား ပြီးသား ဖြစ်ရပါမည်။
▼ Lollipop Theme Icon Pack-V2 ▼ OR ▼ Lollipop Theme Icon Pack-V4 ▼
▼ Material Things Lollipop Theme ▼ OR ▼ Lollipop Material Design Theme ▼
ပို့စ်ရေးသားသူ- ကိုအောင်ဘိုဘိုလွင် (Myanmar Mobile Users Group)
Tha CandyCane - Icon Pack v3.6
ဒီတစ်ခါတော့ ဖုန်းထဲက application icon ဒီဇိုင်းတွေကို အခြားသူတွေနဲ့ မတူအောင် ပြောင်းပြီး သုံးချင်တဲ့
သူတွေ အတွက် CandyCane စတိုင် Tha CandyCane _Icon Pack လေးဖြစ်ပါတယ်။
file size 32.5MB ရှိပြီး android 4.0.3 ကစပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
This icon pack is from my classic christmas collection, white with red stripes stick flavored with peppermint and cinnamon, delicious!
LET'S HOOK UP Website: http://www.tha-icon.com
▼ shared.com ▼ OR ▼ usersfiles.com ▼
Pyae Phyo (MMiTD) by တိုးတိုး
Chrismas Theme icon Pack for Xposed Installer !
ကဲ ...... ချမ်းအေးတဲ့ ဆောင်း ကာလနဲ့" Chrismas " ကာလကို ရောက်ရှိ လာတဲ့ အတွက် Android Phone
ကိုင်ဆောင် သူများ ဒီဇင်ဘာရဲ့အငွေ့ အသက်လေးတွေ မိမိတို့ ဖုန်းပေါ်မှာ ပေါ်နေအောင် ကိုယ့်ဖုန်းရဲ့ Icon
လေးတွေကို " Chrismas " ပုံလေးတွေနဲ့ ပြောင်းပြီး ခံစားချင်တဲ့ ဘော်ဒါများ အတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
- Root ဖောက်ထားရန် လိုအပ်ပါတယ်
- Busybox သွင်းထားရန်လည်းလိုအပ်ပါတယ်
မှတ်ချက် - အချို့ ဖုန်းတွေမှာ ရနိုင် မရနိုင် ဆိုတာတော့ မစမ်းရသေးတဲ့ အတွက် အကုန်လုံး ရမယ်လို့ တော့
ပြီးပြီဆိုလျှင် လိုအပ်တာလေးတွေကို အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါအုန်းဗျာ...................
▼ Xposed Installer ▼ OR ▼ Unicon Module ▼ OR ▼ Chrismas Theme ▼
ပြီးပြီဆိုလျှင် xposed installer ကိုဖွင့်ပြီး framework ကို သွင်းပေးပါ။
ဒီလိုလေး active ဖြစ်ပြီ ဆိုလျှင် စတင် အသုံးပြု နိုင်ပါပြီ။
ပြီးလျှင် Module ထဲဝင်ပြီး unicorn ကို အမှန်ခြစ်ပေးပါ။
ပြီးလျှင် unicorn ထဲ ၀င်လိုက်ပါ ဒီလိုလေးတွေ့ ပါမယ် အဲ့မှာ chrismas theme ကိုပြောင်းလိုက်ပါ။
Root Access မေး ပါလိမ့်မယ်။
ဒီလိုလေးထပ်ပေါ်လာပြီဆိုရင် Restart ဆိုတာရွေးပေးလိုက်ပါ
ပြီးရင် ဒီလိုလေး ထပ်ပေါ်လာပါ လိမ့်မယ် အဲ့ဒါဆို Both ဆိုတာ ရွေးပေးလိုက်ပါ အဲ့ဒါဆို မိမိတို့ ဖုန်းလေးမှာ
Chrismas theme icon pack လေးတွေနဲ့ လန်းလို့ ရပါပြီ။
နောက်ဆုံးမှာ ဒီလိုလေးတွေနဲ့ အလှဆင်ပြီးသွားပါပြီ အားလုံး အဆင်ပြေ ကြပါစေဗျာ..... :)
From : Internet for Myanmar by ညီ ပိုင်
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, December 06, 2014 No comments:
ဆန်းသစ်တဲ့ 3D Icon များနဲ့ အလှဆင်နိုင်မယ့် - Icon Pack Wallpapers 3D Bubble v1.1 Apk
အခု တင်ပေး လိုက်တဲ့ Application လေး ကတော့ သင့်ရဲ့ဖုန်းမှာ 3D Icon အလန်းတွေ နောက်ခံ Wallpaper
အမိုက်စားတွေနဲ့ အလှဆင်ပေးနိုင်မယ့် con Pack Wallpapers 3D Bubble လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
Application တစ်ခုချင်း စီရဲ့ Icon ပုံစံလေးတွေ အားလုံးက တကယ့်ကို ဆန်းသစ်နေတဲ့ 3D ရုပ်ထွက် မျိုးတွေ
အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ နောက်ခံ Wallpaper များကလည်း အဲဒီ Icon တွေ နဲ့လိုက်ဖက်မှုရှိ
တဲ့ Wallpaper များဖြစ်ပါတယ်။
တွဲဖက်အသုံးပြုရမယ့် Launcher တွေကတော့ Nova, Apex, ADW, Smart, Action, Unicon စတဲ့ Launcher
များအပြင် အခြားသောနာမည်ကြီး Launcher ပေါင်းများစွာနဲ့ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
တော်တော်လေးတော့လန်းတယ်ဗျာ။ နမူနာအနေ နဲ့ အောက်မှာ Screen Shot တွေကို ကြည့်လိုက်ပါဦးဗျာ။
Android OS 2.3 နှင့်အထက် ဖုန်းများမှာအသုံးပြုနိုင် မှာဖြစ်ပါ တယ်ဗျာ။
> 1000+ Autochange Icons in XXXHDPI (192X192) – ready for 4K Displays
> 8+ 5K HQ Wallpapers (5120X2880) – iMac 2014 uses the Same
> Each week at least 10 New Icons and 5K Wallpapers
> Compatible 3D Bubble Design
> Same easy way to Recognize your installed APPS
> You Vote Which Icons are Updating
> Easy Feedback
1. DownloadaCustom launcher from Google Play (Nova, Apex, ADW, Smart, Action, Unicon and etc.)
2. Set the custom launcher asadefault launcher by pressing home button.
3. To apply Icon Pack Get to the Settings/Options section of your custom launcher, move to personalization section and select 3D Bubble Icon Pack and Wallpapers HD.
4. To apply wallpaper touch any free space of your home screen, select Wallpapers, then choose 3D Bubble Icon Pack and Wallpapers HD.
5. For manually applying wallpaper download it from one of our web pages and set it via Album/Gallery.
▼ shared.com ▼ OR ▼ usersfiles ▼
ကဏ္ဍ Android, Icon, Phone Application, Theme, Wallpapers
Teorex FolderIco 3.0 + Key (14.5Mb)
မိမိ ကွန်ပြူ တာမှာ folder and FolderIco တွေကို စတို င်တစ်မျိုး လေးနဲ့ ထားချင်တဲ့ သူတွေအတွက် ဒီဆော့
ဝဲ လေးကို ဆောင်ထားလိုက်ပါ။ folder တွေကို မိမိ စိတ်တိုင်းကျ အသုံးပြုပြောင်းလဲချင် တယ်ဆိုရင်အောက်
မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်က 14Mb ရှိပြီး windows အားလုံးမှာ အသုံးပြု နိုင်ပါတယ်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, November 15, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Icon, Window
▼ turbobit ▼ (OR) ▼ dfiles.ru ▼
ကဏ္ဍ Icon, Photo Software, Portable
Android Users များ အသုံးပြု နိုင်တဲ့ AERON HD Theme Nova Icon Pack လေး တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
အသုံးပြုချင်တဲ့သူများ အောက်မှာ လေ့လာပြီး ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
☑ egame launcher ☑ Slide
▼ play store ▼ ▼ appbrain ▼ ▼ usersfiles ▼
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, October 22, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Android, Icon, Launcher, Phone Application, Theme
Android Users တွေ အတွက် Theme Icon Pack အသစ်လေး တွေ့လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ ဒီကောင်လေးကို
Play store မှာ ဆိုရင် $ 1.13 ပေးပြီး ဝယ်ရမှာ ဖြစ်ပေမဲ့ ဒီဆိုဒ်လေးမှာတော့ အခမဲ့ ရယူ အသုံးပြု နိုင်ပါတယ်။
▼ mega.co ▼ (OR) ▼ downloadmm ▼
Android ဖုန်း နှင့် Tablet ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ ဘော်ဒါတို့ အတွက် အလန်းစား theme လေး တစ်ခု တင်ပေးလိုက်
ဒီကောင်လေး ကိုတော့ အောက်မှာ ကျနော် Screen Short တွေပြထားသော ပုံလေးတွေ ကြည့်ခြင်းဖြင့် ဘော်ဒါ
တို့ လန်း မလန်းဆိုတာ ဆုံးဖြတ်နိုင် ပါတယ်ဗျာ။
ကျနော်တော့ တော်တော်ကို သဘောကျ တယ်ဗျာ။ မိမိဖုန်းနှင့် Tablet ထည့်က theme တွေ ကြည့်ုလိုက် တာနဲ့
ကျနော် (OR) ဘော်ဒါတို့ စိတ်ထဲ အလိုလို ကြည့်နူး စရာရနိုင် ပါတယ်ဗျာ။
ဖုန်းအားလုံး Tablet အားလုံးမှာ သုံးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
▼ downloadmm ▼
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, October 18, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Android, Icon, Phone Application